Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ)
Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါဆိုသည်မှာ အသည်း ပျက်စီးသော သူများတွင် အပြုအမူ၊ စိတ်အခြေအ နေနှင့် အာရုံကြောစနစ် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ် နှင့် ဦးနှောက်တွင် အမိုနီးယား (ammonia) များခြင်းသည် ဤပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်စေသည်ဟု ထင်ပါသည်။ အစာ အိမ်နှင့် အူအတွင်းရှိ ဘက်တီးရီးယားသည် အမိုနီးယားကို ပြုလုပ်သည်။ အများအားဖြင့် အသည်းသည် အမိုနီးယားကို ဓါတ်ပြောင်းလဲပစ်သည် (အမိုနီးယားကို အန္တရာယ် မရှိ အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်)။ သို့သော်လည်း အသည်းရောဂါ ရှိသူများသည် အသည်းအလုပ်မလုပ်ခြင်းကြောင့် အမိုနီးယား များ ပိုများနေပါသည်။ အမိုနီးယားသည် သွေးတွင်းဝင်ကာ ဦးနှောက်သို့ရောက်ရှိသည်။ ဦးနှောက် လုပ်ငန်းများကို နှောင့် ယှက်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာများကို ဖြစ်စေသည်။
Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဤဦးနှောက်ရောဂါသည် အသည်းခြောက်သူများ အား လုံး၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်တွင် ဖြစ်ပွားသည်။ မကုသပါက သတိမရဖြစ်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကူးစက်ပျံ့ပွားခြင်း မရှိပါ။ မိဘမှ ကလေးသို့ ကူးခြင်းလည်း မရှိပါ။
Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါ၏ အဓိက ရောဂါလက္ခဏာများမှာ မည်သည့်နေရာသို့ ရောက်နေမှန်းမသိခြင်း၊ သတိမေ့တတ်ခြင်း နှင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ အိပ်ချင်နေပြီး စိတ်နေစိတ်ထား ပြောင်းလဲခြင်း၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ် ဆုံးရှုံးခြင်း နှင့် သတိမရခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင် သည်။
အခြားလက္ခဏာများမှာ အသားဝါခြင်း၊ စကားပြောရာ တွင် ခက်ခဲခြင်း၊ တုန်ရီခြင်း၊ တုန်လှုပ်ပြီး ညီညွတ်မှုမရှိသော လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ထို့အပြင် အသည်းရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်သော အ သားဝါခြင်း၊ ရင်သားကြီးခြင်း၊ ဝှေးစေ့သေးခြင်း (အမျိုးသား များတွင်)၊ ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း နှင့် ခြေထောက် များ ဖောရောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါကို အဆင့် ၁မှ ၄အထိ ပိုင်းခြားထားသည်။ အဆင့် (၁) တွင် အနည်းငယ် စိတ် ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အာရုံစိုက်မှု နည်းခြင်း၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်များ လုပ်နိုင်စွမ်းကျခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ အဆင့် (၂) တွင် ထုံထိုင်းလေးလံခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ကိုယ်ရေ ကိုယ်သွေး ပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်များလုပ် ရာတွင် ပြဿနာအကြီးအကျယ် တက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ အဆင့် (၃) တွင် အိပ်ချင်လာသည် (သို့သော် နိုး၍ရသည်)။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်များ မလုပ်နိုင်ပါ။ မည်သည့်နေရာမှန်း မသိတော့ပါ (နေရာနှင့် အချိန်)။ အဆင့် (၄) တွင် သတိလစ် မေ့မြောခြင်း ဖြစ်သည်။
သင် သို့မဟုတ် သင့်ဆွေမျိုးများတွင် အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာများ ရှိပါက အထူးသဖြင့် အရင်က အသည်းရောဂါ ဖြစ်ဖူးသူများတွင် ရှိပါက ဆရာဝန်အား အကြောင်းကြားပါ။ ရောဂါသည် လျင်မြန်စွာ တိုးပွားလာပြီး ပြင်းထန်စွာ အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း သည် သင်၏အခြေအနေ ကောင်းမွန်ရန် အတွက် အကောင်း ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသည်းကို ဖျက်ဆီးပြီး အသည်းလုပ်ငန်း ကျရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသော ရောဂါများသည် အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုရောဂါ အချို့မှာ ဗိုင်း ရပ်စ် ကြောင့်ဖြစ်သော အသည်းရောင်ရောဂါ ( အသည်း ရောင်ရောဂါ ဘီ နှင့် အသည်းရောင်ရောဂါ စီ) ၊ ပြင်းထန် သော ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများ၊ ကိုယ်ခံအားပြန်လည် တိုက် ခိုက်မှု ရောဂါများ၊ ကင်ဆာရောဂါ တို့ဖြစ် သည်။
စတီးရွိုက်မပါသော အရောင်ကျဆေးများ စသော ဆေး များနှင့် အရက်ကဲ့သို့ အဆိပ်အတောက်များသည် လည်း ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အသည်းခြောက်ရောဂါရှိသူများသည် စိတ်ငြိမ်ဆေးများ နှင့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ သုံးခြင်းဖြင့် ရောဂါရနိုင် သည်။
အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေကို ဘာ တွေက မြင့်စေသလဲ။
အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချို့အချက်များမှာ-
• ပရိုတင်းဓါတ်များ အလွန်စားခြင်း
• အူ၊ အစာအိမ်၊ အစာရေမြိုမှ သွေးထွက်ခြင်း
• ခန္ဓါကိုယ်တွင် အောက်စီဂျင်ပမာဏ နည်းခြင်း
• အဓိက အာရုံကြောစနစ်ကို ဖိနှိပ်သော ဆေးများ (ဥပမာ- Barbiturates၊ benzodiazeoine စိတ်ငြိမ်ဆေးများ)
Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ခန္ဓါကိုယ်စစ်ဆေးမှုကို ပြည့်စုံအောင် ပြု လုပ်လိမ့်မည်။ အခြား ပြဿနာမှ ခွဲခြားသိနိုင်ရန် သွေးစစ် ခြင်း၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါ သည် အခြားရောဂါများ၏ လက္ခဏာများနှင့် ဆင်တူသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါများမှာ အရက်ဖြတ်ခြင်း၊ စိတ်ငြိမ် ဆေး အလွန်အကျွံသောက်မိခြင်း၊ ဦးနှောက်အမြှေးပါး ရောင် ခြင်း၊ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်နည်းခြင်း၊ ဦးနှောက်ကင်ဆာ၊ ဦးနှောက်တွင် သွေးခဲပိတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါသည် အရေး ပေါ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆေးရုံတက်ရန် လိုအပ်သည်။ ကုသမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းကို ရှာ၍ ကုသရန် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- ဆေးများ၊ အစာအိမ်နှင့် အူ လမ်းကြောင်းသွေးထွက်ခြင်း၊ ဇီဝကမ္မ ပြဿနာများ။ အထူး သဖြင့် ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းသည် အစာအိမ်နှင့် အူ လမ်းကြောင်း သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်ပါက ချက်ချင်း ကုသရန် လို အပ်သည်။
Lactulose ဟူသော ဆေးသည် ဝမ်းပျော့ဆေးဖြစ်ပြီး အူအား ရှင်းလင်းရန် ကူညီသည်။ ထိုအခါ ဘက်တီးရီးယား များသည် အမိုနီးယားကို မထုတ်လုပ်နိုင်တော့ပေ။ တစ်ခါတစ်ရံ neomycin ဟူသော ပဋိဇီဝဆေးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို ဆေးသည် အူအတွင်းရှိ ဘက်တီးရီးယားများကို သတ်ကာ အမိုနီးယားကို နည်းစေသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါ ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါ ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
• အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှောက်ရောဂါကို အရင် အခြေအနေပြန်ရောက်အောင် ကုသနိုင်သည်။ သို့ သော်လည်း သတိပြန်မရပါက သေဆုံးနိုင်မှု မြင့်ပါ သည်။
• အသည်းရောဂါရှိသော မိသားစုဝင်တွင် အပြုအမူ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲ မှုများ ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်အား အကြောင်းကြားပါ။
• အရက်မသောက်ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့် အသည်း ခြောက်ခြင်း ဖြစ်နေပါက။
• အသည်းရောဂါရှိသူများတွင် အလွယ်တကူဝယ်၍ ရသော အိပ်ဆေးများသည် ရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။
Hepatic encephalopathy. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000302.htm. Accessed August 12, 2016.